HFE fitaovana fanadiovana ny tontolo iainana ho an'ny ampahany China Manufacturer
Description:Ireo singa sy fitaratra mahasalama momba ny tontolo iainana,Fanamboarana akora simenitra,Hydrofluoroether Detergent Components and Parts
Home > Products > Hydrofluoroether Clean Agent > Fitaovana fanadiovana ho an&#39;ny singa sy ny ampahany > HFE fitaovana fanadiovana ny tontolo iainana ho an&#39;ny ampahany
HFE Fanaraha-maso fanadiovana ny tontolo iainana
Miaraka amin'ny fampandrosoana ny siansa sy ny teknolojia, ny fidirana amin'ny vokatra elektronika dia mihamitombo hatrany. Mba hiantohana ny fiasa ara-dalàna ny vokatra dia lasa zava-dehibe ny fahamendrehan'ny vokatra.
5. Vahaolana momba ny fanadiovana ho an'ny singa sy ny singa dia tsy misy poizina sy tsy mampidi-doza, tsy manelingelina;
7.The Cleaning ranon-javatra taorian'ny fanadiovana dia azo amboarina amin'ny alalan'ny distilling hoe: Izao no hampihena fatiantoka , fandaniana ny fandaniana.
Fitaovana fanadiovana amin'ny fitaovana sy ny singa ampiasaina
Fikojakojana ny fanodinana, fitehirizana ary fitaterana amin'ny orinasa:
Ity kapany indostrialy ity dia feno 25kg / barrel, na ho an'ny mpanjifan-tsakafo, mora voatahiry sy nentina.
Ireo singa sy fitaratra mahasalama momba ny tontolo iainana Fanamboarana akora simenitra Hydrofluoroether Detergent Components and Parts